Mushaharka uu qaadanayo, lambarka loo gacan gelinayo & faah faahinta heshiiska uu Jadon Sancho ugu biirayo Kooxda Manchester United – Gool FM
(Manchester) 04 Agoosto 2020. Sida wararku ay sheegayaan Kooxaha Manchester United iyo Borussia Dortmund ayaa qarka u saaran inay heshiis buuxa ka gaaraan iibka laacibka garabka weerarka ka ciyaara ee Jadon Sancho.
Waxaa haatan la sii shaaciyey faah faahin ku saabsan heshiiska uu xiddigan ugu wareegayo garoonka Old Trafford, mushaharka uu ka qaadan doono Man Utd iyo Lambarka uu u xiran doono.
Wargeyska The Sun ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday in kooxda Manchester United ay ku adkaatay inay heshiis shan sanadood ah la gaarto Sancho, laakiin ay afar sanadood isku waafaqeen.
Waxa uu Wargeysku qormadiisa intaas ku daray in Manchester United ay haysato sanad kale oo dheeraad ah oo ay ku kordhin karto heshiiska xiddigan reer England haddii ay iyadu go’aansato.
Jadon Sancho ayaa mushahar ahaan u qaadan doona lacag dhan 220,000 oo gini isbuucii, taas oo ka dhigaysa ciyaaryahanka shanaad ee ugu mushaharka badan Red Devils.
Geesta kale, Sancho ayaa xiran doona oo loo diyaariyey lambarka 7-aad ee kooxda Man Utd sida warbixinta lagu sheegay, iyadoo lambarkan uu si rasmi ah ugala wareegi doono Alexis Sanchez oo kooxda u xirnaa ka hor inta uusan heshiis amaah ah ku aadin naadiga Inter Milan.
Waxaa la filayaa sidoo kale in xiddiga reer Chile ee Alexis Sanchez si rasmi ah looga diro kooxda ka arrimisa garoonka Old Trafford, iyadoo heshiiskiisa amaahda ah ay kooxda reer Talyaani ee Inter Milan ka dhigi karto mid joogto ah.
Kooxda reer Jarmal ee Borussia Dortmund ayaana haddii dhankeeda la eego faa’iido weyn ku qabta iibka ciyaaryahankeeda Jadon Sancho, maxaa yeelay saddex sano ka hor ayay naadiga Man City uga soo qaateen kaliya 10 milyan oo gini, waxaana ay haatan dib ugu iibinaysaa adduun dhan 110 milyan oo gini.